Akuko - njigide di elu
Ngosiputa ihe ike di elu
Ndị na-ejide ike dị elu bụ klas 8.8, Klas 9.8, klas 10.9, klas 12.9 fasteners. A na-eji ndị na-ejide ike dị elu na-egosipụta ike siri ike, arụmọrụ tensile dị mma, arụmọrụ dị mma, ike njikọ dị elu, arụmọrụ seismic dị mfe, yana mfe na ngwa ngwa.
Ihe eji eme akwa di elu bu ihe eji eme ya
SCM435 na 1045ACR 10B38 40Cr nwere ike ịme ọkwa 10.9 na 12.9. Na mkpokọta, ahịa SCM435 nwere ike ime karịa ọkwa 10.9 na 12.9.
1. Bọt: Otu klaasị nke nwere akụkụ abụọ, isi na ịghasa (cylinder nwere eriri mpụga), nke a ga-ekwekọ na akụ maka imechi ma jikọta akụkụ abụọ site na oghere. A na-akpọ ụdị ụdị njikọ a. Ọ bụrụ na etinyeghị mkpụrụ sitere na bootu ahụ, a ga-ekewa akụkụ abụọ ahụ, yabụ njikọ bolt bụ njikọ a na-ewepu.
2. Ọmụmụ: Otu klaasị na-enweghị isi ma nwee naanị eriri mpụga na nsọtụ abụọ ahụ. Mgbe ejikọtara ya, a ga-agbanye otu njedebe nke waya auger ahụ n'ime akụkụ ya na oghere dị n'ime, na njedebe nke ọzọ site na akụkụ ahụ site na oghere ahụ, a ga-agbanye waya ahụ buru ibu na akụ ahụ, ọ bụrụgodị na abụọ ahụ. akụkụ na-ejikọ ọnụ. A na-akpọ ụdị ụdị njikọ a na njikọ Studio ma ọ bụ njikọ a na-apụ apụ. A na-ejikarị maka otu akụkụ ejikọtara ya na nnukwu ọkpụrụkpụ, ihe mejupụtara ya, ma ọ bụ n'ihi nkwupute ugboro ugboro, adịghị mma maka oge njikọ njikọ.
3. kposara: Ọ bụkwa ụdị ngwa ngwa ejikere nke etinyere isi na ịghasa. Dabere na ebumnuche ahụ, enwere ike ikewa ya n'ime ụdị atọ: kposara igwe, idozi kposara na skru nzube pụrụ iche. A na-ejikarị ihe eji agbanye igwe a maka akụkụ nwere oghere eriri etinyere, yana njikọ ngwa ngwa n'etiti akụkụ nwere oghere site na oghere ahụ adịghị mma. ekwesiri idozi ya na mkpirisi iji dochie uzo n'etiti abuo nke nwere oghere.
4. Mkpụrụ: nwere oghere nwere eriri dị n’ime, na-abụkarị n’ụdị kọlụm hexagonal dị larịị, kamakwa n’ụdị okirikiri larịị ewepụghị ma ọ bụ cylinder dị larịị, nwere bolts, studs ma ọ bụ kposara igwe, eji eme ihe na ijikọ akụkụ abụọ ya. ka ha we buru ihe zuru oke.